14 Apr 2018 . 7:22 PM
အမျိုးသားတွေရဲ့ဖက်ရှင်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာထဲမှာ ခါးပတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခါးပတ်ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကို အဆင်အပြေဆုံးခါးပတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာမျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်အမျိုးသားအတွက် ကိုယ့်ချစ်သူအတွက်ခါးပတ်လက်ဆောင်ဝယ်တဲ့အခါ ဒီအချက်တွေနဲ့ချိန်ထိုးစဉ်းစားပြီး အကောင်းဆုံးခါးပတ်ကိုဝယ်နိုင်ကြမှာပါ။
တချို့ပစ္စည်းတွေ အသုံးအဆောင်တွေဟာ ဈေးပေါတာနဲ့ ဈေးကြီးတာမှာ သုံးစွဲရတာချင်းသိပ်မကွာဘဲ အပြင်အဆင်လောက်သာ ကွာတယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခါးပတ်မှာတော့ ဒီလိုမတွက်သင့်ပါဘူး။ ဈေးများပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ခါးပတ်ဟာ ဈေးသက်သာတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ သိသိသာသာကွာခြားပါတယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့ ခါးပတ်တွေဟာ ခဏလေးနဲ့ပျက်စီးလွယ်တာမို့နောက်တစ်ခုပြန်ဝယ်ရတာနဲ့ မသက်သာလှပါဘူး။ ပိုက်ဆံကုန်တာချင်း အတူတူပါပဲ။ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ရှပ်အကျီင်္တွေထက်ခါးပတ်ကပိုဈေးကြီးနေတတ်တာကို လက်ခံရပါမယ်။
ခါးပတ်မှာ အခြေခံအားဖြင့် Dress Belts နဲ့ Casual Belts ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ ၂ မျိုးလုံးရှိထားသင့်ပါတယ်။ ခါးပတ်ဆိုတာဟာ နာရီ၊ ဖိနပ်လိုမျိုး Accessories တစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ခုတည်းရှိရုံနဲ့ ပြည့်စုံပြီလို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ခါးပတ်ဟာလည်းကိုယ့်ကိုစတိုင်လ်ကျစေတဲ့ အရာတစ်ခုထဲပါတာမို့ ခပ်များများရှိသင့်ပါတယ်။ Dress Belts ဝယ်ရင်တော့ ဖိနပ်နဲ့လိုက်ဖက်ဖို့လိုသလို ကိုယ့်ဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်ဖို့လည်း လိုပြန်ပါတယ်။
တကယ်ရှိသင့်တာကတော့ အမည်းရောင်နဲ့အညိုရောင် Dress Belts ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီအတွက် Casual Belts အမည်းနဲ့ အညို ၊ Cotton ၊ Suede Belt တို့ရှိသင့်ပါတယ်။
ခါးပတ်ကို ခါးပတ်ကွင်းထဲထည့်ပတ်ပြီးပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုလက်မအနည်းငယ်လောက်ထပ်ရှည်နေရပါမယ်။ ဒါမှစလျှိုခဲ့တဲ့ ခါးပတ်ကွင်းထဲကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး လျှိုသိမ်းလို့ရမှာပါ။ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘောင်းဘီဆိုဒ်ထက် နှစ်ဆ သုံးဆကြီးတဲ့ ခါးပတ်ကိုဝယ်ပါ။ ဒါမှ ကွက်တိကျပြီး Fit ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်က ခါး ၃၄ လက်မဘောင်းဘီဝယ်ထားရင် ခါးပတ်ကို ၃၆လက်မ-၃၈ လက်မ ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dress Belts တွေဟာ အကျယ်အများဆုံး ၁.၂၅ လက်မခန့်သာရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်ကြီးရင် Casual ဘက်သွားပါတယ်။ Casual Belts တွေကတော့ ၁.၂၅ ကနေ ၁.၅ လက်မလောက်အထိအကျယ်ရှိသင့်ပါတယ်။
ခါးပတ်ခေါင်းကြီးလေ Formal မဖြစ်လေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရုံးသမားတွေဆိုရင် ခါးပတ်ခေါင်းသေးသေးပြားပြား ရွေးသင့်ပါတယ်။ ခါးပတ်ခေါင်းကြီးကြီးဝိုင်းဝိုင်းကတော့ Casual ပိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာပါတဲ့ ခါးပတ်ခေါင်းတွေရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ခါးပတ်အရောင်နဲ့ကွာဟတဲ့ပြူးပြူးပြဲပြဲတွေကို မရွေးသင့်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် ခါးပတ်ခေါင်းဟာ ၄ မျိုးလောက်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ လျှာပါတဲ့ခါးပတ်ခေါင်းပါပဲ။ သူကမြဲမြဲမြံမြံရှိနေစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့မှုပေးပါတယ်။
buckle withatongue
ဒီဇိုင်နာထုတ်ခါးပတ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လည်သာဆိုင်တွေမှာ ရှာရပါမယ်။ ဈေးကြီးတဲ့လည်သာခါးပတ်ဝယ်ရင်တော့ လည်သာအရည်အသွေးကောင်းမကောင်းသိဖို့ ခါးပတ်ကိုချိုးကြည့်ပါ။ လက်သည်းချွန်နဲ့လည်း ထိုးကြည့်ဖိကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အရာလေးထင်ရင် ပျော့ပျောင်းရင် ရွေးသင့်ပါတယ်။ ခါးပတ်တွေကို သိမ်းဆည်းချိန်မှာလည်း သေသေချာချာခွေပြီး အံဆွဲထဲ၊ ဖိနပ်ဘူးတွေထဲ သိမ်းနိုင်သလို ခါးပတ်ချိတ်နဲ့လည်း ချိတ်ပြီးသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်သလို ထိုးထည့်သိမ်းတာမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ခါးပတ်အကြောင်းသိသင့်သလောက်သိရှိပြီး ဘာကြောင့်ခါးပတ်ကောင်းကောင်းဝယ်ဖို့အရေးကြီးသလဲဆိုတာရှင်းပြနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်။
အမြိုးသားတှရေဲ့ဖကျရှငျအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့အရာထဲမှာ ခါးပတျလညျးပါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ခါးပတျရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ ကိုယျ့အတှကျကို အဆငျအပွဆေုံးခါးပတျကိုမှနျမှနျကနျကနျဘယျလိုရှေးခယျြမလဲဆိုတာမြှဝပေေးသှားပါမယျနျော။ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့လညျး ကိုယျ့အမြိုးသားအတှကျ ကိုယျ့ခဈြသူအတှကျခါးပတျလကျဆောငျဝယျတဲ့အခါ ဒီအခကျြတှနေဲ့ခြိနျထိုးစဉျးစားပွီး အကောငျးဆုံးခါးပတျကိုဝယျနိုငျကွမှာပါ။
တခြို့ပစ်စညျးတှေ အသုံးအဆောငျတှဟော ဈေးပေါတာနဲ့ ဈေးကွီးတာမှာ သုံးစှဲရတာခငျြးသိပျမကှာဘဲ အပွငျအဆငျလောကျသာ ကှာတယျဆိုတာမြိုးရှိပါတယျ။ တဈခါတလတေော့ ဟုတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခါးပတျမှာတော့ ဒီလိုမတှကျသငျ့ပါဘူး။ ဈေးမြားပွီး အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ခါးပတျဟာ ဈေးသကျသာတဲ့အမြိုးအစားနဲ့ သိသိသာသာကှာခွားပါတယျ။ ဈေးသကျသာတဲ့ ခါးပတျတှဟော ခဏလေးနဲ့ပကျြစီးလှယျတာမို့နောကျတဈခုပွနျဝယျရတာနဲ့ မသကျသာလှပါဘူး။ ပိုကျဆံကုနျတာခငျြး အတူတူပါပဲ။ ဂငျြးဘောငျးဘီတှေ ရှပျအကြီင်္တှထေကျခါးပတျကပိုဈေးကွီးနတေတျတာကို လကျခံရပါမယျ။
ခါးပတျမှာ အခွခေံအားဖွငျ့ Dress Belts နဲ့ Casual Belts ဆိုပွီး ၂ မြိုးရှိပါတယျ။ အမြိုးသားတှအေတှကျတော့ ၂ မြိုးလုံးရှိထားသငျ့ပါတယျ။ ခါးပတျဆိုတာဟာ နာရီ၊ ဖိနပျလိုမြိုး Accessories တဈခုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ တဈခုတညျးရှိရုံနဲ့ ပွညျ့စုံပွီလို့တော့မဆိုနိုငျပါဘူး။ ခါးပတျဟာလညျးကိုယျ့ကိုစတိုငျလျကစြတေဲ့ အရာတဈခုထဲပါတာမို့ ခပျမြားမြားရှိသငျ့ပါတယျ။ Dress Belts ဝယျရငျတော့ ဖိနပျနဲ့လိုကျဖကျဖို့လိုသလို ကိုယျ့ဝတျစုံနဲ့လိုကျဖကျဖို့လညျး လိုပွနျပါတယျ။
တကယျရှိသငျ့တာကတော့ အမညျးရောငျနဲ့အညိုရောငျ Dress Belts ၊ ဂငျြးဘောငျးဘီအတှကျ Casual Belts အမညျးနဲ့ အညို ၊ Cotton ၊ Suede Belt တို့ရှိသငျ့ပါတယျ။
ခါးပတျကို ခါးပတျကှငျးထဲထညျ့ပတျပွီးပွီဆိုရငျ ဘယျဘကျကိုလကျမအနညျးငယျလောကျထပျရှညျနရေပါမယျ။ ဒါမှစလြှိုခဲ့တဲ့ ခါးပတျကှငျးထဲကိုသပျသပျရပျရပျလေး လြှိုသိမျးလို့ရမှာပါ။ ကိုယျဝယျတဲ့ဘောငျးဘီဆိုဒျထကျ နှဈဆ သုံးဆကွီးတဲ့ ခါးပတျကိုဝယျပါ။ ဒါမှ ကှကျတိကပြွီး Fit ဖွဈမှာပါ။ ကိုယျက ခါး ၃၄ လကျမဘောငျးဘီဝယျထားရငျ ခါးပတျကို ၃၆လကျမ-၃၈ လကျမ ဝယျရမှာဖွဈပါတယျ။ Dress Belts တှဟော အကယျြအမြားဆုံး ၁.၂၅ လကျမခနျ့သာရှိသငျ့ပါတယျ။ ဒီ့ထကျကွီးရငျ Casual ဘကျသှားပါတယျ။ Casual Belts တှကေတော့ ၁.၂၅ ကနေ ၁.၅ လကျမလောကျအထိအကယျြရှိသငျ့ပါတယျ။
ခါးပတျခေါငျးကွီးလေ Formal မဖွဈလပေါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ရုံးသမားတှဆေိုရငျ ခါးပတျခေါငျးသေးသေးပွားပွား ရှေးသငျ့ပါတယျ။ ခါးပတျခေါငျးကွီးကွီးဝိုငျးဝိုငျးကတော့ Casual ပိုဖွဈပါတယျ။ ကြောကျမကျြရတနာပါတဲ့ ခါးပတျခေါငျးတှရှေေးမယျဆိုရငျတော့ ခါးပတျအရောငျနဲ့ကှာဟတဲ့ပွူးပွူးပွဲပွဲတှကေို မရှေးသငျ့ပါဘူး။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ခါးပတျခေါငျးဟာ ၄ မြိုးလောကျရှေးခယျြစရာရှိပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ လြှာပါတဲ့ခါးပတျခေါငျးပါပဲ။ သူကမွဲမွဲမွံမွံရှိနစေဖေို့ အကောငျးဆုံးထောကျပံ့မှုပေးပါတယျ။
ဒီဇိုငျနာထုတျခါးပတျလိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ လညျသာဆိုငျတှမှော ရှာရပါမယျ။ ဈေးကွီးတဲ့လညျသာခါးပတျဝယျရငျတော့ လညျသာအရညျအသှေးကောငျးမကောငျးသိဖို့ ခါးပတျကိုခြိုးကွညျ့ပါ။ လကျသညျးခြှနျနဲ့လညျး ထိုးကွညျ့ဖိကွညျ့နိုငျပါတယျ။ အရာလေးထငျရငျ ပြော့ပြောငျးရငျ ရှေးသငျ့ပါတယျ။ ခါးပတျတှကေို သိမျးဆညျးခြိနျမှာလညျး သသေခြောခြာခှပွေီး အံဆှဲထဲ၊ ဖိနပျဘူးတှထေဲ သိမျးနိုငျသလို ခါးပတျခြိတျနဲ့လညျး ခြိတျပွီးသိမျးဆညျးနိုငျပါတယျ။ ဖွဈသလို ထိုးထညျ့သိမျးတာမြိုးမလုပျရပါဘူး။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ခါးပတျအကွောငျးသိသငျ့သလောကျသိရှိပွီး ဘာကွောငျ့ခါးပတျကောငျးကောငျးဝယျဖို့အရေးကွီးသလဲဆိုတာရှငျးပွနိုငျပွီလို့ထငျပါတယျနျော။
by Ei Ei .6hours ago